ကျောင်းသားများနှင့် လိင်မှုပြုခဲ့သော ဆရာမအား ထောင်(၅)နှစ်ချ | Burmese Hearts
Burmese news, international news, articles, poems and short novels in Burmese language.
ကမ္ဘာ့သတင်း
Poem – Pic
ကျောင်းသားများနှင့် လိင်မှုပြုခဲ့သော ဆရာမအား ထောင်(၅)နှစ်ချ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကျောင်းသားများနှင့် မိမိ၏နေအိမ်တွင် အုပ်စုလိုက် လိင်မှုပြုခဲ့သော ဆရာမအား တရားသူကြီးက ထောင်ငါးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာမက ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် နှစ်လတာကာလအတွင်း သူမယောက်ျားစစ်မှုထမ်းနေစဉ် သူမ၏နေအိမ်၌ ထိုအချိန်က(၁၈)နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားငါးယောက်ကိုခေါ်၍ အုပ်စုလိုက် လိင်အမှုပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်းသားများက သူတို့ဆရာမကို ဒုက္ခမရောက်စေလို၍ နှုတ်ဆိတ်နေရန် ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပေမယ့် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည့် ဗွီဒီယိုဖိုင်မှုတဆင့် အများ သိသွားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးသုံးယောက်အမေဖြစ်သည့် အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် ဇနီးဖြစ်သူ၏ ယင်းလုပ်ရပ်အတွက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဒေါသဖြစ် ၊ နာကျင်ခံစားခဲ့ရပေမယ့် ဒီ့မတိုင်မီက ၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ အုပ်စုလိုက် လိင်အမှုပြုခြင်းကို နှစ်ဦးသဘောတူ လုပ်ခဲ့ကြဖူးတယ်လို့လည်း ခင်ပွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဇနီးသည် ထိုသို့ပြုမူခဲ့ပေမယ့် ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိသွားမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရူးတစ်ယောက်လို ရှုမြင်ကြသူတွေဟာ ၎င်းကို နားမလည်နိုင်ကြတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted in မြန်မာ့သတင်း and tagged Burmese News, Myanmar News on August 19, 2012 by BurmeseHearts.	Post navigation
← မိသားစုက မကောင်းဆိုးဝါးထုတ်ရင်း သေသွားခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်(၉)လသမီး
ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပါက သင့်လျော်ကောင်းမွန်မည်ဟု သမ္မတတိုက်တွန်း →
Aung Zaw Min:June 16, 2013 at 12:20 pmI like this new..
Recent Posts	ခဲနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ကျွံကျသွားခဲ့သော သားကိုလိုက်ကယ်တဲ့ အမေရော သားပါသေဆုံး
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လိင်တံအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့
IS အဖွဲ့ဝင်နဲ့ ရန်ဖြစ်သော စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ ပစ်သတ်ခံရ
IS အား ဘိုကိုဟားရမ်အဖွဲ့များ သစ္စာခံ
အီတလီကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ၍ ရဲနှိမ်နင်း
ကျောင်းသားသပိတ်သတင်းယူစဉ် ဖမ်းဆီးခံရသည့် သတင်းထောက်နှစ်ဦး ပြန်လွတ်
မော်လမြိုင် ကျောက်တန်း စက်ရုံစု မြေဈေးများ ၁၀ ဆနီးပါး မြင့်တက်
လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသား ဆေးရုံတက်ပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ရ
ရှော့ပင်းမောလ်ထဲ ပြသထားသော လျှပ်စစ်ကားပေါ် တက်မောင်းတဲ့ငါးနှစ်သားက တွန်းလှည်းထဲက ကလေးကိုတိုက်မိ
အီရတ်မှာ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော ဆယ်ကျော်သက် သြဇီနိုင်ငံသား
နိုင်ငံတော်က ချေးယူထားသော ကြွေးမြီများကြောင့် တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းခန့်နှုန်းဖြင့် ကြွေးတင်နေ
ဖမ်းခံထားရသောကျောင်းသားများလွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဒဗယ်လျူဘုရှ့်တောင်းဆို
ဦးဝီရသူက ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွင်းမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်
စည်ပင်ရိပ်သာတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခွင့် နေပြည်တော်စည်ပင် ကန့်သတ်
အာဏာရှင် အကျင့်မပျောက်သည့် အစိုးရဟု အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏ သားအမှု တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးအား စစ်ဆေး
လူနေထိုင်ခွင့်နှင့် မီတာမချပေးမည့် အဆောက်အအုံများစွာရှိနေ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ရထားတံခါးနှင့် ညပ်မိပြီး ရထားအောက်ရောက်သွားသည့် အမျိုးသမီး
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီထောင်လိုသူများ ဧပြီ(၃၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံး လျှောက်ရမည်
မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် တရုတ်ဘဏ်မှ ငွေချေးမည်
ဘိုလီးဗီးယားတွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သူ
ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်း၌ ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်မည့်ဘဏ်က ကျပ် ၁၅ ဘီလီယံ မတည်ရမည်
POPULAR	လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသား ဆေးရုံတက်ပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ရ	ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ရထားတံခါးနှင့် ညပ်မိပြီး ရထားအောက်ရောက်သွားသည့် အမျိုးသမီး	ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လိင်တံအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့	ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏ သားအမှု တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးအား စစ်ဆေး	ရှော့ပင်းမောလ်ထဲ ပြသထားသော လျှပ်စစ်ကားပေါ် တက်မောင်းတဲ့ငါးနှစ်သားက တွန်းလှည်းထဲက ကလေးကိုတိုက်မိ	ငိုနေတဲ့ကလေးတိတ်အောင် လည်ပင်းကို လွှစက်နဲ့ဖြတ်ခဲ့သူ	အီရတ်မှာ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော ဆယ်ကျော်သက် သြဇီနိုင်ငံသား	ခဲနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ကျွံကျသွားခဲ့သော သားကိုလိုက်ကယ်တဲ့ အမေရော သားပါသေဆုံး	IS အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ သွေးဆာသည့်လူအုပ်ကြီးက IS အဖွဲ့သတ်ခဲ့တာတွေကို ရုပ်ရှင်သဖွယ်ကြည့်ကြ	ဗွီဒီယိုဇတ်ကား ဖြန့်ချီပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အင်တာနက်မှ အခပေးကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်	အီးမေးလ်ကနေတဆင့် တင်သည့် အကြောင်းအရာအသစ်များ ရရှိလိုပါက Subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Archives	Select Month
March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 MOST POPULAR	လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသား ဆေးရုံတက်ပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ရ	ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ရထားတံခါးနှင့် ညပ်မိပြီး ရထားအောက်ရောက်သွားသည့် အမျိုးသမီး	ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လိင်တံအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့	ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏ သားအမှု တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးအား စစ်ဆေး	ရှော့ပင်းမောလ်ထဲ ပြသထားသော လျှပ်စစ်ကားပေါ် တက်မောင်းတဲ့ငါးနှစ်သားက တွန်းလှည်းထဲက ကလေးကိုတိုက်မိ	ငိုနေတဲ့ကလေးတိတ်အောင် လည်ပင်းကို လွှစက်နဲ့ဖြတ်ခဲ့သူ	အီရတ်မှာ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော ဆယ်ကျော်သက် သြဇီနိုင်ငံသား	ခဲနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ကျွံကျသွားခဲ့သော သားကိုလိုက်ကယ်တဲ့ အမေရော သားပါသေဆုံး	IS အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ သွေးဆာသည့်လူအုပ်ကြီးက IS အဖွဲ့သတ်ခဲ့တာတွေကို ရုပ်ရှင်သဖွယ်ကြည့်ကြ	ဗွီဒီယိုဇတ်ကား ဖြန့်ချီပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အင်တာနက်မှ အခပေးကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်	RECENT NEWS	ခဲနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ကျွံကျသွားခဲ့သော သားကိုလိုက်ကယ်တဲ့ အမေရော သားပါသေဆုံး
Read previous post:မိသားစုက မကောင်းဆိုးဝါးထုတ်ရင်း သေသွားခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်(၉)လသမီးမလေးရှားနိုင်ငံ Bukit Mertajam က မိသားစုနေအိမ်တွင် အသက် (၂)နှစ်နှင့်(၉)လအရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား မကောင်းဆိုးဝါးဝင်နေသည်ဟု ဆိုကာ မကောင်းဆိုးဝါးထုတ်ခဲ့ကြသည့် မိသားစုဝင်(၇)ဦးအား...ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်မှ ဗိုလ်ချုပ်နေရာအတွက် အဓိကသရုပ်ဆောင် ပြန်ရွေးမည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကားတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာ၌ အဓိကသရုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ထားသော ကိုကျောက်ခဲဟာ ၎င်း၏ဆန္ဒအလျောက် နှုတ်ထွက်သွားသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်နေရာအတွက် သရုပ်ဆောင်မည့် ဇတ်ဆောင်သစ်နောက်တစ်ဦးကို ဆန်ခါတင်အရွေးခံထားရသည့် ခုနှစ်ယောက်ထဲမှ ပြန်ရွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။...Close